Nzira yekubatanidza sei webhupu yekugadzira uye Search Engine Optimization?
Kazhinji kacho, kana uchitanga hurongwa hutsva hwebasa chero ripi zvaro rekutsvaga muIndaneti, chikamu chekufungidzira chinowanzogadziriswa pawebsite uye Search Engine Optimization (SEO). Ngatitarisei - kuva nehuwandu, hunoshandisa-hwemhando uye unyanzvi webhutani yakagadzikana ndeye nyaya dzinokosha kana zvichiuya pakupa nyore nyore uye mukana wekushanyira muenzi. Asi zvakadini kana ndikataura kuti izvi zvose zvakaoma mabasa pakushandura webhusaiti zvinogona kungoparara shure kwezvose? Zvakadini kana vashandisi veIndaneti vasingazombochengeti webhusaiti yakadaro yakaratidzwa mune runyorwa rukuru rweSERP neGoogle? Ndokusaka ndiri pasi apa ndiri kuenda kuzokurukura zvakakosha kukosha kwekubatanidzwa kwakasimba kune mabasa ako pawebsite nekugadzira Search Engine Optimization nguva dzose kuuya nemaoko.
. Ndiri kureva kutenga ma tag tag yechinhu chimwe nechimwe chauri kuisa pamapeji ako webhu. Chinhu chacho ndechokuti vazhinji vezvinjini dzinotsvaga (pamwe neGoogle pachavo) havakwanise "kuverenga" zvinyorwa zvisikwa kunze kwekuti mifananidzo yose ichinyorwa ne tsanangudzo yakakodzera mukunyora. Uyezve, kuva webhusaiti yako yakazara nemifananidzo yakakura zvikuru zvechokwadi inonoka kutora nguva yako yose yekutengesa, saka uchiita zvakaipa nokuda kwekunzvimbo yako yakakwirira muSERPs. Ndosaka zvakakosha kuderedza zvinhu zvaunoona paunenge uchiyeuka zvinotungamirira SEO mirayiridzo paunosarudza mazita emifananidzo, uye kuvabatanidza nekodzero dzekodhi dzako vashandi vanogona kuisa mubvunzo wekutsvaga.
Kugutsikana kwekushandirwa kwewebsite kunowedzera kutsvaga kutsvaga injini
mazuva ano, zvishandiso zvinoshandiswa zvinoshandiswa pakutsvaga Internet nguva nenguva.Tichifunga kuti nhamba inowedzera yevatengi vanogona kutsvaga zvigadzirwa kana maidiro avo zvavanoda kuburikidza nemafoni efoni uye mahwendefa, mobile-friendly web design yakagadziridzwa nehupamhi hwepamusoro muSERPs. Saka, Google yakatanga kuparisa mawebsite aya achiita pasina sarudzo yakakodzera yemabasa akashandurwa kuitira ruzivo rwekufambisa zviri nani kuburikidza nemichina yekushandisa. Ndicho chikonzero chikonzero chinonzwisisika nguva dzose kuchengetedza mhinduro yako yewebhu webhupenyu kuchengetedza Search Engine Optimization inoshanda panguva imwe chete. Kuita izvi nenzira iyi, usakanganwa kuva nechokwadi chokuti zviri mukati mako zvinoteerera kune zvikumbiro zvezwi. Kunze kwezvo, zvinokurudzirwa nenyanzvi kuti zvive zvakanaka zvakanakisisa FAQ zvinyorwa zvinowanikwa mune imwe peji yewebhu yako. Yeuka, maitiro akadaro atova ANOFANIRA kukwanisa zvido zvezvinowanikwa mutsva-mhinduro dzinotsvakurudza mazwi.
Shandisa URL yako
Pano panouya imwe nzira yakasarudzika yekuunza hukuru huri nani pakushandurwa kwewebsite uye Search Engine Optimization. Ndinoreva kuti iwe unofanirwa kubhadhara zvakananga paunosarudza zita reimba. Zvawakapiwa kare, unorayirwa kuisa mazita eGoogle-ane hanya peji yese yewebsite yako. Itai kuti URL imwe neimwe nepeji yepamusoro idzoke zvakare kutakura tsanangudzo yakakosha yakave nechinangwa chemashoko nemitsara. Kuita kudaro, iwe uchazadzisa unyanzvi hunoshandiswa nevashandisi-hukama hwewebsite yako yakagadziriswa, ne Search Engine Optimization inoshumira kuti iwedzere kuwedzerwa kwekunyoresa zviri nani neGoogle's crawling bots Source .